Akukubi konke ngokhuvethe – iSishayamthetho - Bayede News
Isithombe: Igunundu Agency / nguSiyethaba Mhlongo
USomlomo namalungu baphansi phezulu enkonzweni yesizwe yize kunokhuvethe
IsiZulu sinenkulumo ethi ukuwa kwenye indlu ngukuvuka kwenye. Zolo lokhu wonke umuntu ubekhala ngokuthi ukhuvethe luhlasele umhlaba wonke. Isikhalo besingekho nje kuphela kwezempilo kepha besi sikhulu nasesimweni semisebenzi enhlobonhlobo. ISishayamthetho naso ngesinye sezikhungo okuqale kwanokwesabela ukuthi singahle siphazamiseke ngoba amalungu aso okungabashayimthetho kanye nalabo abasebenza emahhovisi nabo bengamalungu omphakathi abengahle athinteke ngokhuvethe. Nembala ngalesi sikhathi eminye imikhakha iphoqeleke ukuba ivale njengamahhovisi omasipala okunede kwavela ukuthi kukhona asebethintekile base benquma ukuthi akuvalwe.
ElaboHlanga leluse ukusebenza kweSishayamthetho saKwaZulu-Natal nesiholwa nguSomlomo uMhlonishwa uNontembeko Boyce. Inhloso lapha bekuwukuthola ukuthi ngabe iSishayamthetho sithinteke kangakanani ngalesi sikhathi.
Ebuzwa ngalokhu, uSomlomo uqale ngokuvuma ukuthi zikhona izinhlelo eziphazamisekile ngokuvalwa kwezwe abebekade bezoba nazo beyiSishayamthetho. Uthe izinhlaka abake baxhumane nazo ziphazamisekile wabe esenza isibonelo ngohlelo lwaminyaka yonke oluba ngoNdasa. Ngaphansi kwalolu hlelo iSishayamthetho sixhumana nabezenkolo abavela kuwo wonke amahlelo.
“Kulo msebenzi sisuke sihlangana nazo zonke izinkolo ezikhona, okungamaKhrestu, iNkolo yesintu, amaMuslim namaHindu nabanye,” kusho uSomlomo. UMengameli uCyril Ramaphosa wamemezela ukuthi ukuvalwa kwezwe kuzoba mhla zingama-26 kuNdasa kanti lo mcimbi wawuhlelelwe ukuthi ube khona makuphela inyanga.
Uqhube ngokuthi bahlala phansi babuka beyiSishayamthetho. “Asibanga nako ukuzethemba saqala sayizama ngokwemihlangano sisebenzisa ubuxhakaxhaka be-inthanethi nalapho sasisafunda ukuthi ibanjwa kanjani imihlangano ngalolu hlobo,” kusho yena.
Uqhube ngokuthi izinhlelo ebezizoba ngoMbasa nazo azibange zisaba khona, njengosuku lokugubha i-Afrika (Africa Day).
“Ngokwejwayelekile ukugubha lolu suku thina siyiSishayamthetho sike sibe nengxoxompikiswano ngoba siyisifundazwe iKwaZulu-Natal siyisifundazwe esinabantu abaningi abaqhamuka kulo lonke izwekazi i-Afrika ngakho kufanele sihlezi silekelelana, kungabi bikho nokucwasana ngokwebala ngoba uke waba khona kulesi sifundazwe.”
Uthi inhloso yale ngxoxompikwiswano ukuthi amalungu eSishayamthetho abe nengxoxo eyakhanayo futhi ebumba izizwe ezahlukene. Njengokuthi kubhekwana kanjani njengama-Afrika kulekelelwane. Ngokuqhubeka kwesikhathi uthi iSishayamthetho sibe nakho ukuzethemba ngoNhlaba babe sebenza iPhalamende lezisebenzi. USomlomo uthe: “Ngokujwayelekile sike sibe nabantu abazinkulungwane kepha kulo nyaka asilenzanga ngendlela ejwayelekile, sanquma ukuthi silibambe ebuxhakaxhakeni. Bese simema abantu. ISishayamthetho besinabo ubudlelwane nabezindaba kepha ngoba umsebenzi wethu akusiwona wokuhambisa ingqalasizinda isikhathi esiningi asibahehi kakahulu. Kodwa sithe uma sesiqala sesisebenza kanje sazibona sesifinyelela kubo.”
Wengeze ngokuthi ngesikhathi sebezethemba sebebona ukuthi kuyenzeka babe sebengena kungxoxompikwiswano yohlahlo sabiwozimali lweminyango, ngokwamavoti. IKwaZulu-Natal inamavoti ali-15. Esokuqala esikaNdunankulu elokugcina kube esezemidlalo.
“Sekwenziwa isabelomali siqalile sandisa abantu esifinyelela kubona ezinkundleni zokuxhumana, kumathelevishini nemisakazo, lapho bebuye babize ngisho naBahlonishwa ukuthi bazocacisa lapho bengatholanga kahle khona, lapho kwaba ukukhula kokuzethemba kukhuliswa ukuthi kulobu buxhakaxhaka kuyafinyeleleka kubantu.”
Uthe noma ngabe besebenakho ukuzethemba kepha bebenayo into ethi izwi labantu alikazwakali kahle, banquma ukuthi ngenyanga yentsha ngokuya bekhula mhla zili-17 bebenePhalamende lentsha, bekungokokuqala ukuthi kuxhunyanwe nomphakathi ngokuthi ubabhelele ezinkundleni zokuxhumana bese labo abathulayo badingide udaba ngaleso sikhathi, kuphendule kuzwa wonke umuntu. “Lokho besikwenza sifuna ukuvala igebe lokuthi asisababoni abantu njengoba usho uMthethosisekelo ukuthi kufanele siqinisekise ukubambisana nabantu ngendlela enomsoco. Besikwenziswa ukuthi nanoma lusithintile ukhuvethe kepha asiyizame indlela. Uma sibheka emakhasini ethu ezinkundla zokuxhumana bakhuphuke ngama-43% abantu abasilandelayo.” Uthe imibuzo nokuzibandakanya bebengakujwayele kepha ngesikhathi uNobhala weSishayamthetho emthumelela kusuka mhla zingama-20 kuNhlaba kuya zili-16 kuNhlangulana baseshwe abantu abazi-11 400 ezinkundleni zokuxhumana, bese ukuzibandakanya nabantu kungaphezu kwezi-2 400 lokhu athi uSomlomo bekungavamile ukuba bakuthole ezinkundleni zokuxhumana. Okunye abakutholile ngePhalamende lentsha bakwazi ukuxhumana nabantu abayi-1 300 ngelanga elilodwa kuyiYouTube.
Uthe uma behlangene kukhuluma abantu abambalwa akufani noma sekusebuxhakaxhakeni. “Lokhu kusifundisa ukuthi noma isidlulile iCovid-19 lezi zindlela zokuxhumana asingaziyeki ngoba zenza abantu bakwazi ukuxhumana nathi. Uma sibheka ngokohlahlomali yeVoti le-13 eyaba mhla zizi-4 kuNhlangulanga saxhumana nabantu abayi-1 800, ngohlahlomali olulodwa, okungavamile ukuthi kuxhunyanwe nomphakathi uma kwenziwa uhlahlomali, kugcina ngesikhathi uMphathiswa eyithula bese kugcina kumalungu eSishayamthetho.” kusho uSomlomo.
“Ngike ngithi uma ngikhuluma kumalungu eSishayamthetho ngithi nakunoma iyiphi into esehlele asithathe okuhle esikufundile. ISisiyishayamthetho siyafunda, okunye esikufundile ukuthi ngeke silokhu senza izinto ngendlela eyodwa. Ukhuvethe lusifundise ukuthi uma siyovakashela izindawo akusakwazi ukuthi kuphume amalungu ali-11 njengoba besijwayele ukwenza labo bantu bebegcina behambela izindawo ezi-2 ngelanga elilodwa, kodwa ukhuvethe lubiza ukuthi sehlise inani. IHhovisi likaSomlomo lacela kuwo wonke amalungu namaqembu ukuthi iqembu libe naBahlonishwa aba-3 lokhu kwasenza ukuthi isifunda ngasinye sibe namaqembu ama-3 okusheshisa umsebenzi. Sikwazile ukuthi siqede sesibonile izikole ezili-100 lokhu esingakaze sikwenze.”
Uphethe ngokuthi beyiSishayamthetho bayashayeka ngokuthi kuyagulwa, abantu abahlwempu balahlekelwa imsebenzi. Kodwa bazobona ukuthi abantu ababamele babamele ngokweqiniso yini ngoba okubiza ukuthi amalungu eSishayamthetho afinqe imikhono asebenzela abantu. “Sinazo izingqinamba kepha azizinkulu kunezifundo esisizifundile, ezisakhayo nezisikhulisayo.”
nguSiyethaba Mhlongo Jul 6, 2020